​चीनमा रहेको एउटा अनौठो स्कुल, जहाँ सिकाइन्छ डेटिङ
Thursday, 24 May, 2018 11:27 AM
संसारमा सिक्न र सिकाउन के नै बाँकी छ र ! अब कुनै पनि समस्या समस्या रहेनन् सबै समस्याको समाधान छ । हुन त प्रेम गर्न र ‘डेट’मा जान सकैले कसैलाई सिकाउन नपर्ने हो तर चीनका युवाहरु भने यही समस्यासँग जुधिरहेका छन् । लैङ्गिक अनुपात विग्रदा चिनीयाँ युवाहरुलाई डेटिङमा जानका लागि केटी नै पाउन मुस्किल परेको छ । तर, चतुर चिनीयाँहरुले त्यसको पनि जुक्ति निकालेका छन् । अहिले चीनमा डेटिङ कसरी गर्ने ? केटीलाई कसरी पट्याउने भन्ने सिकाउन स्कुल नै खुलेका छन् । बीबीसी हिन्दीबाट साभार सामाग्री
के तपाईंलाई डेटिङमा जानु छ ?
के तपाईंलाई डेटिङको तौर–तरिका थाहा छ ? प्रेमीकासँग भेट गर्दा उसको इच्छा, चाहनालाई ख्याल गर्नुपर्ने, उसका भावनामा संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने थाहा छ ? के तपाईंलाई सफल डेटिङका लागि राम्रोसँग नाच्न जान्नुपर्छ भन्ने थाहा छ ? यदि यसको जवाफमा तपाईंले छैन भन्नुहुन्छ भने यी समस्याको हल पनि छ । आउनुहोस, हामी तपाईंलाई चीनको डेटिङ स्कुलमा लैजान्छौं । जहाँ सफल डेटिङको लागि मानिसहरुलाई तालिम दिइन्छ ।
चीन, जनसंख्याको हिसावले संसारको सबैभन्दा ठूलो देश हो । यहाँ केटाभन्दा केटीहरुको जनसंख्या धेरै छ । यसको कारण हो चीनको एक बच्च नीति । यो नीतिले एक मात्र बच्चा जन्माउने अनुमति दिएको थियो । जसका कारण लैङ्गिक अनुपात विग्रियो । अहिले चीनका युवाहरुलाई केटी पाउनै गाह्रो भएको छ । प्रेमिका पाउन चीनका युवाहरुलाई ठूलै लडाईं लड्नुपर्छ । यसैले अहिले चीनमा डेटिङ स्कुल र कोचिङ क्लासहरु खुलिरहेका छन् ।
बेइजिङमा एउटा डेटिङ स्कुल ‘लव एनर्जी’ चलाउँछन् यी कुई उर्फ ‘म्याजिक कार्ड’ले । उनी भन्छन्,‘ डेटिङ एक परफेक्ट डान्स जस्तै हो । कहिले आफ्नो साथीलाई आफूतर्पm तान्नुपर्छ, कहिले टाढा धकेल्नु पनि पर्छ । यस दौराउन उप्रति लगातार संवेदशील भने बन्नैपर्छ । लव कोचिङको क्रेज चीनमा बढ्दै गइरहेको छ । यसको अनलाइन कोर्ष गर्ने हो भने ३० डलर प्रतिमहिना खर्च लाग्छ । यदि क्लासमै बसेर यसको कोर्ष गर्ने हो भने ४५०० डलरसम्म शुल्क तिनुपर्ने हुन्छ । यी कुई भन्छन् उनका अधिकांश ग्राहक २३ देखि ३३ बर्ष उमेर समूहका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा कान्छो युवा १९ बर्षको र सबैभन्दा जेठो ५९ बर्षको । उनीहरु डेटिङको उत्कृष्ट आइडिया सिकेर केटीहरु पट्याउन चाहन्छन् ।
यी लव कोचिङ सेन्टरमा केटाहरुको मेकओवर पनि गरिन्छ । उनीहरुको सोशल मिडिया प्रोफाइलका लागि फोटो सुट पनि गरिन्छ । केटाहरुलाई ‘काबे डान’ नामको जापानी आइडिया पनि सिकाइन्छ जसमा कुनै केटीको पछि पर्खालमा हात राखेर उसलाई प्रभावित गर्न कोशिस गरिन्छ । चीनको विग्रेको लैङगिक अनुपातले डेटिङलाई चुनौतीपूर्ण बनाई दिएको छ । सन् २०१६ मा चीनमा महिलाको अनुपातमा पुरुषको संख्या तीन करोड ज्यादा थियो । यो सरकारी आँकडा हो ।
‘म्याजिक कार्ड’ भन्छन्,‘ केटाहरु अक्सर केटीसँग कुरा गर्न हिचकिचाउँछन् । आफूले गाली खाइन्छ कि भन्ने डर उनीहरुमा छ । ’
सीधै सोध्नुहोस– मेरी साथी बन्ने हो ?
अन्र्तमूखी केटाहरुले त झनै चुनौतीहरुको सामना गर्ने गर्दछन् । उनीहरु केटीसँग प्रेमको कुरा गर्न डाराउँछन् । यो चुनौतीबाट छुटकारा पाउन तिनीहरुलाई ट्रेनिङको जरुरी छ ।
‘म्याजिक कार्ड’का अनुसार प्रेम गर्न चाहने केटाहरुले दायाँबाँया कुरा गर्नुभन्दा सिधै भन्नुपर्छ, के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु ? उनी भन्छन्,‘ लव र डेटिङको स्कुल र कोचिङको क्लास चलाउनु त्यति सजिलो छैन । काफी कर्मचारीको जरुरतपर्दछ । पैसा खर्च हुन्छ । त्यसका लागि कार्यालय र अन्य सुविधाहरुको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अनलाइन कोर्षको माग बढिरहेको छ । र, अनलाइनमार्फत काम गर्न सजिलो पनि छ । काल्पनिक डेटिङ कोर्ष तयार गर्न खर्च पनि कम लाग्छ । केही अडियो भिडियो क्लासेज तयार गरेपछि पुग्छ । अनि बाँकी रहन्छ मार्केटिङको काम मात्र ।